Kuyini, kwenzeka kanjani futhi imiphi imiphumela i-rime enayo? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela wake wezwa ngezindaba ku i-rime. Kuyinto yesimo sezulu esenzeka lapho inkungu iba yiqhwa. Ukuze lo mkhuba ubonakale kumele kube nezici ezithile kanye nezici ezithile. Ngokuvamile isikhathi esinamazinga okushisa aphansi nenkungu ephikelelayo siyadingeka. Yize kuyiqiniso lokuthi yisimo sezulu esenzeka ezindaweni eziningi, asaziwa kahle kubantu.
Ngalesi sizathu, sizonikezela le ndatshana ukukutshela zonke izici zomphetho nokuthi kungani kwenzeka.
1 Yini irimu
3 Kungani kwenzeka rim
I-Pablo VA - SiyiPalencia
Kuyinto yesimo sezulu esenzeka lapho inkungu iba yiqhwa. Lapho kunenkungu ebandayo nephikelelayo ebangelwa umswakama ophakeme, ukuvame ukuvela. Abathwebuli bezithombe abaningi basebenzisa lolu hlobo lomkhuba ukuthatha izithombe ezithakazelisayo. Imvamisa kwenzeka ezindaweni lapho kunenkungu eminyene khona amazinga okushisa ehla ngaphansi kuka-0 degrees. Kulezi zilinganiso zokushisa iphuzu lamazolo lingaphansi kokubandayo.
Ngalesi sikhathi kulapho amazinga wamanzi antantayo emoyeni eqala ukuba yiqhwa ebusweni bendawo. Siyakhumbula ukuthi amanzi adinga indawo ukuze afrize. Ngakho-ke, izinhlayiya zesihlabathi ezinosayizi omncane ziyadingeka ukuze zisebenze njengomswakama we-condensation we-hygroscopic. Lapho amaconsi amanzi eqala ukuba yiqhwa ezindaweni zawo akha izimpaphe noma izinaliti zeqhwa elithambile. Lezi zakhiwo ziyefana neqhwa kepha azifani.
Indawo lapho kwenzeke khona ukuqhuma kufana kakhulu nenye indawo lapho kuneqhwa khona. Kodwa-ke, uma sisondela ezindaweni zamatshe, amagatsha ezihlahla, amaqabunga, njll. Siyabona ukuthi lezi zinaliti ezincane nokwakheka okufana nezimpaphe kweqhwa kubangelwa yinkungu eqandisiwe. Amadolobha namadolobha aseSpain anomfula oseduze yiwona akhethwa kakhulu ukuthi kwenzeke lo mkhuba. Kungenye yezizathu zokuthi kungani i-rime yenzeka njalo ngesikhathi sobusika eValladolid noma eBurgos.
Futhi ukuthi imifula iwumthombo njalo womswakama endaweni. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokugeleza kwamanzi njalo, kuvela izimbali eziminyene ezisiza ukugcina umswakama wendawo. Lapho kunokungafani kwamazinga okushisa emini nasebusuku, lolu hlobo lwenkungu eminyene luvamise ukwenzeka futhi ngenxa yezimbali luhlala lugcinwa. Uma izinga lokushisa elizungezile lehla ngaphansi kwe-0 degrees, i-rime kungenzeka yenzeke.
Siyabona ukuthi uma ukuduma sekwenzekile kungenzeka ngezindlela ezimbalwa. Uma i-hydrometer yenzeka phezulu futhi izinga lokushisa lehla laya kuma-2 degrees ngaphansi kuka-zero lapho kukhona umoya, siyabona ukuthi i-rime iba nzima futhi amakristalu e-ice akha ngendlela ehlukile. Lezi zinhlayiya zeqhwa azinayo inqubo yokwakheka efana neqhwa eyenzeka lapho kuneqhwa, kepha kunalokho zakha uchungechunge lwezinaliti ezikhula ziqonde ngakuwo umoya. Uma i-rime ihlala isikhathi eside nezimo ezithandayo, iqhwa lizokwazi ukuqoqeka.
Into okungafanele siyidide nge-rime yiqhwa. Kuyinto ejwayelekile kakhulu ukudida izehlakalo ezimbili ezihluke ngokuphelele. Ukuze i-rustle yenzeke, kubalulekile ukuthi kube nenkungu eminyene emvelweni. Isithwathwa senzeka lapho ukufinyela komswakama uqobo emvelweni. Kulokhu, akudingekile ukuthi kube nenkungu, yize kuyiqiniso ukuthi umswakama omningi uyadingeka emvelweni.
I-Rime yenzeka lapho sekuvele kukhona indawo enenkungu ekwazi ukugcina umswakama ovela emvelweni. Ngalesi sizathu, kuvame kakhulu ezindaweni lapho kunomfula nezimbali ezihambisana khona. Impela, uma kungokokuqala ubona irimu, ingakumangaza futhi ithi ifana ncamashi namathafa aneqhwa. Kuyabonakala ukuthi lapho kuvela lesi sihlava ukuthi iqhwa eliwile lijule kakhulu. Leli gama laziwa kakhulu ngaphakathi kweNhlonhlo Yase-Iberia.
Kungani kwenzeka rim
Ukuze kwenzeke lesi simo sezulu, kudingeka isibhakabhaka esicwengekile ebusika, amazinga okushisa aphansi nendawo ethile lapho kugcina khona umswakama owanele. Kuvame kakhulu ezindaweni ezisezintabeni lapho kunomfula nezimbali ezihambisana nakho. Ibizwa kakhulu njenge idiphozi yeqhwa eyakhiwa ukubanda kwamaconsi enkungu noma amafu aphansi. Kungashiwo ukuthi inkungu ayilutho ngaphandle kwamafu aphansi ezingeni lomhlaba.
Ukuze lokhu kwenzeke kwenzeke izinga lokushisa elingaphansi kweqhwa liyadingeka. Le yindlela inkungu ekhiqizwa ngayo ngemvamisa enkulu ezindaweni zezigodi, ikakhulukazi. Umphumela oyinhloko walesi senzeko ukwenzeka ukupholisa isikhathi sasebusuku ngemisebe. Ngalokhu, kudingeka kube nomehluko omkhulu phakathi kwamazinga okushisa emini nawasebusuku.
Izimo ezidingekayo ukuze kudume umsindo isibhakabhaka esicacile, ukungabikho komoya, umehluko omkhulu phakathi kwamazinga okushisa emini nasebusuku, namazinga okushisa ekuseni angaphansi noma ngaphansi kancane kuka-0 degrees. Uma kuhlangatshezwana nazo zonke lezi zimo zemveloMhlawumbe sinenkungu ejwayelekile yasekuseni ezophenduka ukubengezela. Kuvame kakhulu ezindaweni ezinesigodi somfula ezinomswakama ophakeme kakhulu namazinga okushisa aphansi.
Amazinga okushisa ebusuku kufanele abe phansi kakhulu futhi umswakama ohlobene kakhulu abe phezulu. Umswakama owenziwe isembozo samafu kufanele ubekwe ezingeni lomhlabathi, okuzokwenza ukuthi uphenduke iqhwa lapho ugcobana naphezulu. Umoya obandayo uvama ukwehla emithambekeni futhi unikeze umswakama omkhulu osiza ukwakheka kwenkungu. Lo mswakama ohlobene kakhulu yilokho okusiza ukuhlinzeka ngamanzi adingekayo ekwakhekeni kwenkungu, kamuva, ebanda ngaphezulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nerimu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Rumble
Hugo Amabhola kusho
Kungakanani ukuthayipha iphutha, ukuthi akekho ohlela lezi zinto?
Phendula uHugo Bolas